Boob lagu hayo Dhulka Danta-Guud ee ku yaalla Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Tan iyo billowgii sanadkan markii uu dhamaadey mudo-xileedka dowladda, waxaa Muqdisho si xowli ah uga socday boobka dhulka danta-guud, oo shaqeysiyaad kamid ah Maamulka Farmaajo ay dana gaar ah u isticmaalayeen.
Meel kastoo banaan oo dhulka dowladdu lahayd shaqsiyaad baa xirtay, qaarkood dhismooyin guryo iyo goobo ganacsi ayaa laga sameystay, waxaana kamid ah meelahaas dhulk ballaaran oo ku yaalla afaafka hore ee Garoonka Aadan Cadde, oo daaro dhaadheer laga dhistay, lagana kireeyay hay'ado iyo shirkado.
Madaxda maamulka gobolka Banaadir ayaa ah kuwa ugu badan ee boobka wada, iyagoo u sanmeystay dukumentiyo been ah dhulka dowladda, waxaana arintan keentay in banaanbaxyo ka dhacaan Muqdisho, oo ugu dambeeyay midkii Tiyaatarka Qaranka iyo dhulka Biyaaso Liibaro (Barxadda Ceelgaabta) ee degmada Xamar Jajab.
Farmaajo oo qancinaya shacabka, iskana leexinaya tooshka, ayaa soo saarey qoraal uu sharci-darro uga dhigay Dhulka Danta guud ee la bixiyey intii uu xilka hayey 2017-2021.
Halkan hoose ka akhri wareegtada:
Boosaaso waxay gashay xaalad cakirnaan ah iyo xiisad dagaal kadib markii agaasimaha PSF uu diiday xilka qaadis lagu sameeyay bishii lasoo dhaafay.